China Full Steel Dome Head Blind Rivet Ngentloko enkulu umzi-mveliso kunye nabavelisi |Yuke
Intloko yentsimbi eyiDome eyimfama egcweleyo enentloko enkulu
Le dome head blind rivet iimveliso zenziwe ngentsimbi.Inokuqina ngakumbi, ingabinaxhala ngakumbi, ibe bhetyebhetye kwaye ibe sefashonini ngakumbi.Ineplastiki ephezulu, ukumelana nokudinwa kakuhle, kwaye iqinile kwaye ingqindilili.Kwaye inokusetyenziswa kwiinkalo ezahlukeneyo.
Siyimveliso enkulu yokudibanisa e-China, iirivets, iindongomane, i-riveter yesandla zezona mveliso zethu ziphambili.
Sinokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo ze-aluminiyam eyimfama i-rivet kwaye sinokwenza iimpahla ngokuyimfuneko njengoko ufuna, singathanda ukukunika ixabiso elikhuphisanayo, kwaye sakhe intsebenziswano ende kunye nawe kunye nexesha lakho.
UkuQeda komphezulu: I-Zinc ifakwe / i-Zinc ifakwe
1.Amava emveliso yobuchwephesha.
I-YUKE RIVET ikhethekileyo kwi-rivet eyimfama, i-rivet nut, i-fastener iminyaka engaphezu kwe-10.
2.Gqibezela izibonelelo zemveliso
Sinomgca omnye opheleleyo oquka umatshini wokubumba obandayo, umatshini wepolishi, umatshini wonyango, umatshini wokudibanisa, umatshini wokuvavanya, umatshini wokupakisha njalo njalo.
3.Ixesha elifutshane lokuhambisa.
Siya kuqinisekisa ukuhanjiswa kweentsuku ze-15 ~ 20 kwisikhongozeli esinye
Siza kuvelisa i-rivet kwisitokhwe.
Sisebenzisa iipakethi ezisemgangathweni kunye neetreyi zokuthumela ngaphandle.
Iileyibhile zokhuseleko ziya kusetyenziswa ngokubanzi ekupakisheni ngokweemfuno zabathengi.
Yasekwa ngo-2007, iWuxi Yuke ibe ngumvelisi ochwephesha weerivethi ezingaboniyo kunye neziqhoboshi iminyaka emininzi.
Iimveliso zethu zithunyelwa kuzo zonke iindawo zehlabathi kwaye zinegama elihle.Sinobudlelwane bexesha elide kunye nabathengi bethu.
Kwangaxeshanye, sikwadibanisa uphando kunye nophuhliso, sikholelwa ukuba sinokuzisa iimveliso ezingcono kunye neenkonzo ezingcono kubathengi bethu.Sinokuzisa amava awonelisayo ngakumbi kubathengi bethu.
Ngaphambili: IAluminiyam yeDome Intloko eyimfama iRivet enentloko enkulu
Okulandelayo: Intloko yeDome eyimfama iRivet eneMizobo enemibala
I-Stainless Steel Pop Rivets
Intsimbi engatyiwa 304 dome intloko pop blind rivet